“Vinicius Junior wuxuu badbaadiyay Real Madrid” – Ronaldo – Gool FM
Dajiye November 22, 2019
(Brazil) 22 Nof 2019. Halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo ayaa falanqeeyay xaaladda da’ayarka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan iyo kooxda Real Madrid ee Vinicius Junior.
Weeararyahankii hore kooxaha Barcelona, Inter Real Madrid iyo AC Milan ayaa u arka Vinicius Junior uu bandhig fiican ka sameeyay Lo Blancos xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2018/2019, isla markaana uu ka badbaadiyay kooxda cad cadka xaaladii xumeyd.
Si kastaba ha noqotee, waxqabadka Vinicius Junior ayaa sii xumaaday tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan, wuxuuna la kulmay dhaleeceeno badan, kaddib markii uu dhaliyay hal gool oo kaliya 8 kulan uu ka ciyaaray horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba Ronaldo ayaa wareysi uu ku bixiyay “Fox Sports” wuxuu ku xaqiijiyay in Vinicius Junior uu mustaqbal ku leeyahay kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Vinicius Junior waa ciyaaryahan weyn, wuxuuna leeyahay tayo aad u sarreysa, wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay”.
“Wuxuuna Real Madrid ka badbaadiyay fashil weyn, waxaan jeclahay inaan ku soo darro kooxdeyda” ayuu hadalkiisa ku soo xiray halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo.
Horudhac: Leganes vs Barcelona… (Kooxda ugu sarreysa horyaalka La Liga iyo tan ugu hooseysa oo galabta wada ciyaaraya)